ज्यान लिने पानी - Pradesh Today ज्यान लिने पानी - Pradesh Today
वर्षामासले कुनै न कुनै प्रकारको विपद् ल्याईरहन्छ । विभिन्न समय र अवस्थामा हुने आकस्मिक दुर्घटनाहरूले हरेक दिनजसो मानवीय क्षति भइरहेको छ । कतै बाढी पहिरोको कहर छ ? भने कतै कोरोना महामारी छ ? फरक– फरक प्रकारका विपद् र दुर्घटना भइरहेका छन् ।
त्यसलाई टार्न सकेमा सुरक्षित हुने र टार्नसक्ने अवस्था नभए मृत्यु हुने अवस्था रहन्छ । कतिपय दुर्घटनाहरू आफै सिर्जित हुने गरेका छन् भने कतिपय दुर्घटनाहरू अरूबाट सिर्जित हुने गरेका छन् । दाङसहित प्रदेश नम्बर ५ मा भने पानीले मानवीय क्षति धेरै नै गर्ने गरेको छ ।
१२ जिल्लाको अवस्थामा एक वर्षमा नियाल्दा पानी मानिसका लागि बरदानभन्दा पनि अभिशाप भएर आइरहेको छ । धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ । एक वर्षमा दाङमा मात्रै पानीमा डुबेर आठजनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ ।
स्थानीय सरकारहरूले पानी सुरक्षाको लागि भन्दौ धमाधम जलाशयहरू निर्माण गरिरहेका छन् । बर्सेनी जलाशयमा करोडौ खर्च भएको छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले नगरलाई जलाशययुक्त बनाउने अभियान नै सुरू गरेको छ ।
नगरमा जनप्रतिनिधिहरू आएदेखिकै वर्षबाट जलासय अभियान सुरू भएको छ । यो वर्ष मात्र सातवटा जलासय थप निर्माण गरिएको छ । एक वडा एक पोखरीको अभियान नै लिएर घोराहीमा गत वर्ष २० वटा पोखरी तथा जलाशय, ड्याम निर्माण गरिएका थिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि पानीको स्रोत संरक्षणका लागि पोखरी निर्माणको अभियानलाई अघि सारेकै छ । जिल्लामा ति जलासय र नदी, खोला, कुलोको पानीका कारण मानवीय क्षति भइरहेको छ ।
जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिले निर्माण भएका र गरिएका पानीका तालहरू प्रसस्त नै छन् । तर तिनको उचित ब्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसक्दा त्यहि पानीले बर्सेनी मानवीय क्षति गराई रहेको छ ।
पानीको उचित व्यवस्थापन गर्नसकेमा मात्रै उपयोगिता प्राप्त हुने हो । पानीको संरक्षण र व्यवस्थापन नभएमा त्यसले अभिशापकै काम गर्छ । जो बर्सेनी भइरहेको छ । सरकारले ध्यान दिएर पानीलाई अभिशाप हैन बरदानको चिनारी दिन सक्नुपर्छ ।
त्यसको सही र उचित सदुपयोग हुन जरूरी हुन्छ । पानीलाई पनि जीवन बचाएर सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । पानीमा खेलाची हैन चनाखो भएर व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अनि मात्रै पानीको स्रोत पनि संरक्षण हुने र नागरिकको ज्यान पनि पानीबाट बच्ने छ । आम मानिसहरू पनि पानीसँग खेलाची गर्नुभन्दा सहज र सजक हुन आवश्यक छ ।